”Carruur sida Astori muhim u ah ayaa maalin walba la dilaa laakiin dan lagama laha” – Dani Alves oo dood dhaliyay! – Gool FM
”Carruur sida Astori muhim u ah ayaa maalin walba la dilaa laakiin dan lagama laha” – Dani Alves oo dood dhaliyay!
(Paris) 05 Maarso 2018 – Laacibkii hore ee Juventus ee Dani Alves ayaa sheegay inuu ka ‘xun yahay’ geerida Davide Astori isagoo u tacsiyeeyay qoyskiisa, balse wuxuu sheegay “inay sidoo kale maalin kasta dhintaan kumannaan carruur, oo iyaguba muhiim u ah sidiisa.”
Dunida kubadda cagta ayaa shalay la ruxantay kaddib geeridii Astori ee Axaddii, balse waloow uu Alves murugo ka muujiyay arrintaa misna wuxuu su’aal ka keenay in laacibka la siiyo dareen ka badan midka loo muujiyo dadka maalin kasta ku geeriyoonaya dunida maanta.
“Walaac aad u badani nama qabanin waayo aad uma aqoonin laacibka. Waa se ka xumahay waxa ku dhacay qoyskiisa.” ayuu laacibkani shir jaraa’id ka sheegay kahor kulanka ay Paris Saint-Germain Champions League kula ballansan tahay Real Madrid.
“Yeelkeede, dunida waxaa ku dhinta kumannaan carruur ah, oo aan helin dareen badan oo la mid ah kan isaga loo muujiyay.” ayuu raaciyay.
TOOS u daawo: Crystal Palace vs Manchester United - LIVE (Shaxda suurtagalka ah)